Tababare Cabdi Joon oo Taariikh cusub sameeyey – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By Abdihakim Sharif Ali / November 20, 2019 January 21, 2020
Muqdisho(SONNA)- Tababare Cabdi Joon ayaa taariikh wanaagsan ka sameeyay dhacdada tartanka koobka General Daa’uud kaddib markii saddexaad oo uu gaaray final-ka tartankan General Daa’uud.
Hoggaamiye Cabdi Joon waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah macallimiinta ugu wanaagsan ee jooga dalka isagoo la la meel dhigo macallin Jose Mourinho marka loo eego falsafada uu isticmaalayo tababarahan.
Cabdi Joon ayaa gaaray markii saddexaad oo xiriir ah final-ka koobka General Daa’uud isagoo hoggaaminaya kooxo kala duwan, sida Elman iyo kooxda iminka uu horkacayo ee Horseed.
Kooxda Elman ayuu kula guuleysatay koobka General Daa’uud sanadkii 2017-kii xilligaas oo ay ka qaadeen naadiga Jamhuuriya, isla sanadkii ku xigay wuxuu qabtay naadiga Cawo iyo Maalin ee Horseed wuxuuna sanadkaas la gaaray final-ka koobka General Daa’uud, balse nasiib-darro Horseed waa laga qaaday waxaana ka gacan maroojisay koobka naadiga Muqdisho City Club.
Sidoo kale sanadkan 2019 ayuu taagan yahay markale final-ka koobka General Daa’uud wuxuuna la ballansan yahay ciyaarta kama dambeysta ah kooxda Muqdisho City Club, taas oo la xusuusto in sanadkii la soo dhaafay ay ka qaatay koobkan, balse uu rabo inuu ka aar-guto Kooxdan M.C.C.
Macallin Cabdi Joon ayaa soo leyliyay kooxo dhowr ah, waxaana ka mid ahaa, Gaaska 2003-dii, Jeenyo oo xilligaas oo yaqaanay Gaheyr sanadkii 2004-tii, Savaana oo hadda loo magac bixiyay Batroolka sanadkii 2005-tii iyo kooxda Elman.
Tan iyo markii loo dhiibay xilka macallinimo ee Kooxda Horseed Cabdi Joon ayaa wax badan ka badalay Naadigan, iyadoo la xusuusto sanadkii la soo dhaafay in si dhib ah loogu qaaday horyaalka Somali Premier League.
Sidoo kale Kooxda Horseed wuxuu ku soo biiriyay dhowr ciyaartooy oo ka kala keensaday kooxaha dalka, kuwaasoo iminka halbowle u ah kooxdan.
Final-ka koobka General Daa’uud ayaa lagu wada in la ciyaaro maalinta bari ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay 21-bishaan, Horseed oo ku taamaysa inay ku guuleysato Koobka General Daa’uud oo goor hore ugu dambeysay iyo kooxda Muqdisho City Club oo doonaysa inay difaacato koobkan.